China Umzimba-woMdibaniso-weNdibano-Manifold-Uhlanganiso-iijigs-ulungiso-isisombululo mveliso kunye nabenzi | Weldo
Indibano yomatshini, indibano yemidlalo
Emva kokugqitywa kokulungiswa kwazo zonke iindawo ze-cnc machining, ukuba kukho imfuneko, sinokubonelela ngeenkonzo zebandla koomatshini, izinto ezixhasayo, izinto ezixhasayo, njl njl. Nceda abathengi ukuba bonge ixesha, ugcine umsebenzi, kwaye ugcine ukhathazeka.
1: Iqhubekekisa iindawo machining cnc ngokungqinelana imizobo processing.
2: Gqiba umphezulu womhlaba.
3: Ngokudibanisa imizobo yokuhlanganisa iindawo zabathengi.
Thumela i-imeyile kuthi phantsi umthwalo kwi-pdf
Ngeteknoloji yethu ekhokelayo nanjengomoya wethu wokuyila izinto ezintsha, intsebenziswano, izibonelelo kunye nokuqhubela phambili, siya kwakha ikamva eliqaqambileyo kunye nombutho obekekileyo wase-China OEM China OEM Milling Turning Lathe Parts Precision Elungiselelwe i-CNC Machining Part, iminyaka emininzi yamava omsebenzi, sikuqondile ukubaluleka kokubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo eziphambili ngaphambi kokuthengisa nasemva kwentengiso.
Inkampani yethu ibheka "amaxabiso afanelekileyo, umgangatho ophezulu, ixesha elifanelekileyo lokuvelisa kunye nenkonzo elungileyo emva kokuthengisa" njengemigaqo yethu. Siyathemba ukuba basebenzisane kunye nabathengi ngakumbi kuphuhliso kunye nezibonelelo kwixesha elizayo. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi.
Inkampani yethu oko yasekwayo, ihlala ibheka imveliso ekumgangatho ophezulu njengobomi benkampani, inyusa rhoqo itekhnoloji yokuvelisa, inyusa imveliso egqwesileyo kwaye iyaqhubeka isomeleza inkampani yolawulo olugqwesileyo. Amashishini ongezelelweyo, ukuthembela kuyafika apho. Ukuqina kwethu kuhlala kunakho nanini na.
Umgangatho olungileyo I-China ye-CNC yezahlulo, iicandelo zoMatshini, inkampani yethu ixhasa umoya "wovuselelo, ukuvumelana, umsebenzi weqela kunye nokwabelana, iindlela, inkqubela phambili". Sinike ithuba kwaye siza kungqina amandla ethu. Ngoncedo lwakho olunobubele, siyakholelwa ukuba singenza ikamva eliqaqambileyo kunye nani
Ukudibanisa imizobo ebonelelwe ngabathengi kufuneka ngokucacileyo kwifom yePDF.
I-Q1: Ndingayifumana phi imveliso yolwazi kunye nexabiso?
I-A1: Sithumele i-imeyile yophando, siya kuqhagamshelana nawe njengoko sifumana imeyile yakho.
Q2: Ndingalifumana ixesha elingakanani isampuli?
I-A2: Kuxhomekeke kwizinto zakho ezithile, kwiintsuku ezisi-7 ziyafuneka ngokubanzi.
I-Q3: Zeziphi iintlobo zolwazi olifunayo ukuze ucaphule?
I-A3: Nceda uncede ubonelele ngemveliso yokuzoba ngePDF, kwaye kuya kuba ngcono ukuba ube kwi-STEP okanye kwi-IGS
Q4: zithini iimeko zokuhlawula?
I-A4: Samkela i-50% njengedipozithi yentlawulo, xa iimpahla zigqityiwe, sithatha iifoto zetshekhi yakho kwaye emva koko uhlawule imali eseleyo. Kwimali encinci, samkela i-Paypal, ikhomishini ye-Paypal iya kongezwa kwi-odolo. Kwimali enkulu, kukhethwa i-T / T
Umbuzo: Ukuhanjiswa kwempahla njani?
I-A5: Sihambisa iimveliso yinkampani yekhuriya okanye ngokweemfuno zakho
Q6.Ingabe inkampani orhwebo okanye mveliso?
A6: Singabantu mveliso ngqo ngaphezu kwe-10 iinjineli abanamava kunye nabasebenzi abangaphezu kwama-40 ngokunjalo 2,000 square metres ndawo kumasifundisane.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu oCwangcisiweyo oCwangcisiweyo oCwangcisiweyo weCNC CNC weeNxalenye zoBhedu-Weldo
Inkampani inokuqhubeka kunye notshintsho kule marike yemveliso, uhlaziyo lwemveliso ngokukhawuleza kwaye ixabiso lincinci, le yintsebenziswano yethu yesibini, kulungile.
NguKaren waseDubai - 2018.02.12 14:52
Ukuhanjiswa kwangexesha, ukumiliselwa ngokungqongqo kwezibonelelo zempahla, ukuhlangabezana neemeko ezizodwa, kodwa kunye nokusebenzisana ngokubonakalayo, inkampani ethembekileyo!
Ngu-Renata wase-Indonesia-2017.06.16 18:23